fun – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
ကံကောင်းလို့ . . .
“မနေ့က အရေးကြီးအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ ရုံးမပျက်ပါနဲ့ဆိုမှ မင်းဘာလို့ ရုံးမလာတာလဲကွ” “မနေ့က ရုံးလာဖို့အထွက် ပေ ၃၀ လောက်မြင့်တဲ့ တိုက်ခန်းလှေကားပေါ်က လှိမ့်ကျသွားလို့ပါ ဆရာရယ်” “ဟေ… အေးပါ၊ ငါမသိလို့စိတ်ဆိုးမိတာပါ… ဒါပေမဲ့ မင်းက အခု ဘာမှလည်းဖြစ်မနေပါလားကွ” “ကံကောင်းလို့ပေါ့ဆရာရယ်.. ကျွန်တော်လိမ့်ကျတဲ့နေရာက...
မနက်စာနဲ့ ညနေစာတော့ မလျှော့နိုင်ဘူး . . .
အ၀လွန်ရောဂါဖြင့် ဆေးရုံရောက်လာသော လူနာကို ဆရာဝန်က ပြောနေသည်။ ” ဦးလေးကျန်းမာရေးအနေအထားအရ ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ချဖို့ လိုအပ်နေလို့ တစ်နေ့ကို ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀ ထက်ပိုမစားပါနဲ့လို့ မှာထားရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ကိုယ်အလေးချိန်က ပိုများလာတာလဲဗျ” “ ကျွန်တော်လည်း ဆရာပေးတဲ့ ဘယ်အစားအစာမှာ...